दुनियाकै अनौठो गाउँ, जहाँका सबै युवतीहरु कुमारी छन् ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/दुनियाकै अनौठो गाउँ, जहाँका सबै युवतीहरु कुमारी छन् !
गाउँ भन्दा बाहिरको कुनै पनि केटासँग त्यहाँका युवतीले बिहे गर्न चाहँदैनन् र बिहे गरिहालेमा पनि केटाले आफ्नो गाउँ छाडेर सोही गाउँमा भित्रिनुपर्दछ । यो मातृसत्तात्मक गाउँको रुपमा रहेको छ । गाउँमा विवाहित महिलाहरुले समेत आफ्ना लोग्नेलाई गाउँमा बस्न दिएका छैनन् ।
उनीहरुलाई हप्तामा ५ दिन कामका लागि गाउँ बाहिर पठाइन्छ र सप्ताहन्तमा मात्र घर फर्किन पाउँदछन् । १८ वर्ष कटेका छोराहरु पनि गाउँमा बस्न पाउँदैनन् । सन् १८५१ मा यो मातृसत्तात्मक गाउँको रुपमा स्थापना भएको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
अब पार्टीको झ`ण्डा होइन, राष्ट्रिय झ`ण्डा बो`केर एक जुट हो`औं !! एक शेयर अव स्य गर्नु होला !!
नयाँ वर्षको पहिलो दिनमात्र फुल्ने र नेपालमा मात्रै पाइने यो हो अनौठो फूल !!